December 2015 | iBiz Service Provider
How to reach more of your Facebook fans with organic posts
December 15, 2015 By ibiz-admin In Uncategorized No Comments
သင်တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ် တွေဟာ လူတွေဆီအရောက်နဲနေရင် ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ…? အရင်ဆုံး facebook မှာပါတဲ့ Insight ကို click လုပ်ပြီး လူအရောက်နဲ နေတဲ့ post ကိုကြည့်ပါ။ ပြီးရင်အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့အချက်တွေကို စဉ်းစားဖြေရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ – ဒီလကစပြီးတော့ လူတွေဆီကိုအရောက်နဲနေတာလား…? – ဘယ်လို post မျိုးတွေ တင်တာလဲ…? (ဥပမာ. Link, Photos, Videos, etc.) – ပုံတွေတင်တဲ့ နေ့ရက်နဲ့ အချိန်တွေက ပုံသေဖြစ်နေသလား… ? – Online ပေါ်မှာ လူအများဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုံတွေတင်ဖြစ်တာလား…..? အစရှိတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်တစ်ခုက post တွေကို တင်တဲ့အခါတိုင်း post ရဲ့ ဒီဇိုင်း၊ တင်တဲ့အချိန် စတာတွေကို ပြောင်းလဲစမ်းသပ်ကြည့်ပါ။ တစ်ခုပြောင်းလည်းပြီးတိုင်း အဲဒီ post […]
How to choose For Your Facebook Ads
Facebook ပေါ်မှာ လုပ်လို့ရတဲ့ ကြော်ငြာ အမျိုးအစား များစွာရှိပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကFacebook ပေါ်မှာ ကြော်ငြာတစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ် က ဘာကိုအဓိက လိုချင်တာလဲ ဆိုတာကိုအရင် ပြတ်ပြတ်သားသား သိရှိ ဆုံးဖြတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီသိရှိဆုံးဖြတ်ပြီးမှ လုပ်သင့်တဲ့ ကြော်ငြာအမျိုးအစား ကို ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။ Facebook Ads အမျိုးအစားနဲ့ ဘာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအသုံးပြုကြသလဲဆိုတာကို ယှဉ်တွဲဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ Lead generation Ads (သင့်အကြောင်းလူတွေစိတ်ဝင်စားလာပြီးအရောင်းဖြစ်ပေါ်စေချင်ရင်သုံးပါ။) Store visit Ads ( သင့်အနီးဝန်းကျင်ကလူတွေ သင့်လုပ်ငန်းထံသို့ ဝင်ရောက်လာစေလိုလျှင်သုံးပါ။) Brand Awareness Ads ( သင့်လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ်ကို လူသိများစေလိုလျှင်သုံးပါ။) Traffic Ads (သင့်၏ကိုယ်ပိုင် wesite, Application ထံသို့ လူအများရောက်လာစေလိုလျှင် သုံးပါ။) […]
E commerce ရဲ့ အရှည်ကောက်ကတော့ Electronic commerce ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ online ပေါ်မှာအရောင်း အဝယ်ပြုလုပ် တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် oline shopping site,auction site, eBay site တွေပေါ်မှာရောင်းဝယ်တာတွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်တွေအကြားရောင်းဝယ်ျမှုတွေ၊ Online Banking တွေအားလုံး E commerce မှာအကြုံးဝင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အများစုက သူတို့ရဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း တွေကို online ပေါ်မှာ လုပ်ကိုင်လာကြတာကြောင့် ၂၀၁၈ မှာ Ecommerce ကပိုပြီး ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေရောင်းချမှုတွေကလဲ Ecommerce ကိုပိုမိုဖွင့်ဖြိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။ ခန့်မှန်းချက်များအရ Ecommerce ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ ၇၀% ဟာမိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းပေါ်ကနေ အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Facebook လို social media site တွေကလည်း […]
862, Damaryone Street
10 Mile, Insein Township. Yangon, Myanmar
+95 1 663621
+9594200 41884
Sat 9am – 12am
© iBiz Service Provider All Rights Reserved 2018